Mapisarema 92 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Jehovha anorumbidzwa nekusingaperi
Mabasa ake makuru uye pfungwa dzake dzakadzama (5)
‘Vakarurama vachatumbuka semuti’ (12)
Vakwegura vacharamba vachibudirira (14)
Pisarema. Rwiyo rwezuva reSabata. 92 Zvakanaka kuonga Jehovha+Uye kuimba nziyo dzekurumbidza zita renyu, haiwa imi Wekumusorosoro, 2 Kuzivisa mangwanani nezverudo rwenyu rusingachinji+Uye usiku nezvekutendeka kwenyu, 3 Pachiridzwa chiridzwa chine tambo gumi nechine tambo nhatu,Uye rudimbwa rune mutinhimira unonakidza.+ 4 Nekuti makaita kuti ndifare, haiwa Jehovha, nekuda kwemabasa enyu;Ndinopembera nemufaro nekuda kwemabasa emaoko enyu. 5 Chokwadi mabasa enyu makuru, Jehovha!+ Pfungwa dzenyu dzakadzama kwazvo!+ 6 Hapana munhu asingafungi angazviziva;Uye hapana munhu akapusa anogona kunzwisisa izvi:+ 7 Vakaipa pavanomera semasora*Uye vese vanoita zvakaipa pavanotumbuka,Zvinenge zvichiitika kuti vaparadzwe zvachose.+ 8 Asi imi munokudzwa nekusingaperi, haiwa Jehovha. 9 Chokwadi tarisai vavengi venyu mavakunda, haiwa Jehovha,Tarisai kuparara kuchaita vavengi venyu;Vese vanoita zvinhu zvakaipa pavachaitwa kuti vapararire.+ 10 Asi imi muchakwidziridza nyanga yangu seyenzombe* yemusango;Ndichanyorovesa ganda rangu nemafuta matsva.+ 11 Maziso angu achatarisa vavengi vangu vakundwa;+Nzeve dzangu dzichanzwa nezvekuwa kwevanhu vakaipa vanondirwisa. 12 Asi vakarurama vachatumbuka semuchindweUye vachakura semusidhari uri muRebhanoni.+ 13 Vakadyarwa muimba yaJehovha;Vanotumbuka muzvivanze zvaMwari wedu.+ 14 Kunyange pavanenge vachembera,* vacharamba vachibudirira;+Vacharamba vaine simba uye vari vatsva,+ 15 Vachizivisa kuti Jehovha akarurama. Ndiye Dombo rangu,+ uye maari hamuna chisina kururama.
^ Kana kuti “seuswa.”
^ Kana kuti “simba rangu serenzombe.”
^ Kana kuti “vachena musoro.”